ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂-၈-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂-၈-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- မင်းဓမ္မပန်းကွင်းအား ပြောင်းရွှေ့ရန် စည်ပင်မှ အင်အားသုံး ဖြေရှင်း (ရုပ်သံ) click
- မင်းဓမ္မပန်းကွင်း စည်ပင်က အင်အား ၅ ထောင်ခန့်ဖြင့် တိုက်ခိုက်၊ ၂ ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရ (ရုပ်သံ) click
- ပေးထားသည့် ကတိအတိုင်း ခံစားခွင့်မရသဖြင့် ဘွဲ့ရအလုပ်သမများ ဆန္ဒပြ click
- ၈၈ ငွေရတု ဧည့်သည်တော်အနေဖြင့် မိန့်ခွန်းပြောခွင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ခွင့်ပြုထား (ရုပ်သံ) click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားဦးမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အပေါစား ပြက်လုံးဖြစ်မည်ဟု ဗြိတိန် အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ပြော (ရုပ်သံ) click
- ဖွဲ့စည်းပုံအသစ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းမည်ဟု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများညီလာခံ ကြေညာ click
- ဗမာပြည်နယ် ဖော်ထုတ်ရန် တိုင်းရင်းသားညီလာခံတွင် သဘောတူ click
- UNFC က ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းရေး ပါဝင်သည့် အခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲမည် click
- နိုင်ငံတကာအမြင်တွေကို တန်ပြန်ဖို့ ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် (ရုပ်သံ) click
- အတိတ်တွေက အသစ်ဖြစ်နေဆဲ (ဆောင်းပါး) click
- အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေသစ်ကို မကြာမီ ပြဋ္ဌာန်းမည် (ရုပ်သံ) click
- အိန္ဒိယနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ်းရိုးတန်း ကင်းလှည့်ရေယာဉ်များ ထောက်ပံ့ရန်ရှိ (ရုပ်သံ) click
- ရေကြီးမှုကြောင့် ရန်ကုန်တွင် ထိုင်းစားသောက်ကုန် ပြတ်လပ် click
- ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ၃ ဦး သေဆုံး၊ ၁ ဦး ပျောက်ဆုံး click
- ကရင်နှင့် မွန်တို့တွင် ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ၃ ဦး သေဆုံးပြီး ၁ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ (ရုပ်သံ) click
- ငါးဖမ်းစက်လှေ ဆီတိုင်ကီအတွင်း ၀င်ရောက်ဆေးကြောသူ ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ (ရုပ်သံ) click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ အလိမ်ခံရ click
- မြန်မာ လူပွဲစားဂိုဏ်းချုပ် ဆိုသူကို ထိုင်းရဲက ဖမ်းလိုက်ပြီ click
- လူပေါင်း ၆၀၀ ကျော် ရောင်းစားမှု သံသယရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားကို ဖမ်းဆီး click
- လုပ်ငန်းရှင် ၁၀ ဦး၏ ကြွေးကျန်စာရင်း မွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေညာ click
- အခွန်ရှောင်ကာ အခွန်ကြေညာလွှာ မတင်သည့် ကုမ္ပဏီများအား ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေအရ အရေးယူတော့မည် (ရုပ်သံ) click
- အိုင်တီအသုံးပြုမှုနှင့် ပစ္စည်းသစ်များ ထွက်ရှိမှုများလာခြင်းကြောင့် ICT ပြပွဲများ ပိုမိုပြုလုပ်လာ (ရုပ်သံ) click
- အပ်ကားရှား၍ ကားဟောင်းတစီး သိန်း ၁၀၀ ကျော် ဈေးတက် click
- နေပြည်တော် အဝေးပြေးလမ်းမှာ နာနာဘာဝတွေ ရှိနေသလား click
- ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း အလိုတော်ပြည့်ကျောင်း၌ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် (ရုပ်သံ) click
- ကိုညီညီလွင် အိမ်ထောင်ကျ click
- လူရွှင်တော် ပါပါလေး ကွယ်လွန် click
- လူရွှင်တော် ဦးပါပါလေး ကွယ်လွန် click
- ကိုရီးယား-မြန်မာ အနုပညာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ “တို့ထိအာရုံ” ကို ချဉ်းကပ်ကြည့်ခြင်း click
- ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲဝင်မည့် မြန်မာယူ-၂၃အသင်းကို ပဏာမကစားသမား ၃၀ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်း (ရုပ်သံ) click
- သန့်ရှင်း စိမ်းလန်း စိုပြည်သော ချစ်ကြည်ရေးသို့ click
- အက်ဒ်ဝပ်စနိုးဒင်းကို ရုရှားတွင် ၁ နှစ် ခိုလှုံခွင့်ပြု click
- စနိုးဒင်ကို ရုရှားခိုလှုံခွင့်ပေးမှု အလွန်အမင်း စိတ်ပျက်စရာကောင်းဟု အမေရိကန် ဆို (ရုပ်သံ) click
- ဗလင်စီယာတိုက်စစ်မှူး ဆိုလ်ဒါဒိုကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဟု စပါး အတည်ပြုကြေညာ (ရုပ်သံ) click
မင်းဓမ္မပန်းကွင်းအား ပြောင်းရွှေ့ရန် စည်ပင်မှ အင်အားသုံး ဖြေရှင်းတာကတော.
အာဏာသုံး ၊ အနိုင်ကျင်.တာဘဲ ။
်လုံးဝ လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်ကို ရန်ကုန်စည်ပင်က ကျူးလွန်သွားတယ်။ ဒီအကြမ်းဖက်မှုကို ကျူးလွန်ဝံ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ တာဝန်ရှိသူတွေကို မဖြစ်မနေ တရားစွဲသင့်တယ်။ အာဏာပိုင်ဆိုသူတွေ နဲနဲမှ ယုံကြည်စရာမရှိဘူး။ ဥပဒေနဲ့မညီရင် တရားစွဲနိုင်တယ်။ ဒီလို အကြမ်းဖက်တာကတော့ အင်မတန် ရုပ်ဆိုးအကြည်းတန်လွန်းတယ်။ အံ့လည်းသြတယ်။
မင်းဓမ္မပန်းကွင်းအား ပြောင်းရွှေ့ရန် စည်ပင်မှ အင်အားသုံး ဖြေရှင်း။
ခင်ဗျားတို.ကိုမြေကွက်ချထားပေးတုန်းက ထက် မြေဈေးက အဆ ၂၀ လောက်တက်သွားတာ
ဒီလို အကြမ်းဖက်တာ ကို အလျင်အမြန် ဖေါ်ထုတ်အရေးယူ သင်.ပါတယ် ။
ဥပဒေရဲ. အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာ